Maxaa ka jira in la xaliyey khilaafkii Farmaajo iyo Rooble? | Warbaahinta Ayaamaha
Maxaa ka jira in la xaliyey khilaafkii Farmaajo iyo Rooble?
MUQDISHO-AYAAMAHA-Ra’iisal wasaaraha Soomaaliya, Maxamed Xuseen Rooble, oo la hadlay ganacsatada Soomaalida ah ee ku nool Nairobi ayaa meesha ka saaray in khilaaf uu kala dhexeeyo Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Maxamed (Farmaajo).
Safarka Rooble ayaa dhaliyay in dadka qaar ay ku eedeeyaan in uu heshiis ku aaddan arrimaha khaadka iyo muranka badda uu la geli rabo Kenya.
Ra’iisal wasaaraha ayaa si cad u beeniyay in uu wax heshiis ah la galay Kenya.
“Waxaan idiin sheegayaa halkan in aan wax saxiixo uma iman. Waxaan kale oo rabaa in shacabka Soomaaliyeed aan u sheego in dhulka, cirka iyo badda Soomaaliyeed ay yihiin lama taabtaan. Maanta iyo berri toona igama fileysaan in aan ka hadlo arrinta badda ee taalla maxkamadda Hague oo aan dhawaan ka sugeyno jawaabta,” ayuu sheegay ra’iisal wasaaraha.
Xiriirka Kenya iyo Soomaaliya ayaa sanadkii u dambeeyay gaaray meel hoose, waxaana labada dal ay kala qaateen safaaradaha.